हाइकिङ जाने सोचमा हुनुहुन्छ, यी बन्न सक्छन् नेपालमा उपयुक्त गन्तव्य…. – News Nepali Dainik
हाइकिङ जाने सोचमा हुनुहुन्छ, यी बन्न सक्छन् नेपालमा उपयुक्त गन्तव्य….
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०४, २०७७ समय: ६:०८:२१
काठमाडौं– पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका युवायुवती शहरभन्दा केही परको क्षेत्र घुम्न जाँने प्रचलन बढेको छ ।
विदा वा फुर्सदको समयमा हाइकिङ जाने संस्कृतिमा विकास भएको हो ।
शहरको धुँवा, धुलो र ट्राफिक जामबाट दिक्क भइरहँदा शरीर र मतिस्क दुवैलाइ रिफ्रेस बनाउनकै लागि पनि धेरैजसो युवाहरु हाइकिङ जाने गर्छन् ।
शनिवारको दिन भरपुर मनोरञ्जन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी हुन सक्छन् तपाइका आकर्षक हाइकिङ स्थानहरु:
चन्द्रगिरी हिल्स पछिल्लो समय निकै चर्चित बनेको छ । समुन्द्री सतहबाट २५ सय ५१ उचाइमा रहेको चन्द्रगिरी भौतिक सुविधिासम्पन्न पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनिन्छ । चन्द्रगिरी भालेश्वरको मन्दिर पनि रहेकाले दर्शनका लागि जानेहरुको भीड पनि उत्तिकै हुन्छ ।
चन्द्रगिरी हिल्स्मा रहेको भ्यू टावरबाट काठमाडौं उपत्यका, कञ्चनजंघा, मनास्लु, मकालु सगरमाथा लगायतका हिमालको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
हाइकिङ जानका लागि चन्द्रगिरीको छुट्टै रुट पनि रहेको छ । कीर्तिपुरबाट जाँदा मच्छेगाउँबाट यात्रा सुरु गरेर छापडाँडा हुँदै चन्द्रगिरी पुग्न सकिन्छ ।
एक दिनको हाइकिङका लागि उपत्यकावासीको अर्को रोजाइ चम्पादेवी हो । हिमाली तथा पहाडी श्रृंखलाको अवलोकनसहित छोटो अवधिमै काठमाडौंको धुवाधुलो डोडेर स्वस्च्छ वातावरण भएको ठाउँमा पुगिन्छ ।
समुन्द्री सतहबाट २३ सय मिटर उचाइमा रहेको यस चुचुरोको यात्रा भने फर्पिङ आइपुगेपछि समाप्त हुन्छ । हिमालय श्रृंखलाको अवलोकन तथा हरियाली जंगल यो रुटको प्रमुख विशेषता हुन् ।
फुलचोकी ललितपुर जिल्लामा पर्छ । काठमाडौंबाट यात्रा गर्नका लागि पनि बाटो राम्रो हुने हुँदा यस क्षेत्रमा हाइकिङ जानेको संख्या बढिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाइ घेरेर राखेका पहाडहरुमध्ये सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो, फुलचोकी । समुन्द्री सतहबाट २ हजार ७ सय ५० मिटर अग्लो स्थानमा रहेको यो डाँडामा पनि प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । फुलचोकीको यात्रा गोधावरीबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्ने ककनी नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित छ । ककनी पिकनिक स्पोर्टका रुपमा चिनिन्छ तर पछिल्ला समय हाइकिङका लागि ककनी युवाहरुको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ ।
शिवपुरी डाँडा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपलिका अन्तर्गत पर्छ । समुन्द्री सतहबाट २७ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडा उपत्यकाको दोस्रो अग्लो चुचुरो पनि हो ।
यस डाँडामा हाइकिङ जानेहरुले अन्य सुविधा पनि लिन पाउनेछन् । जसमध्ये सेतो गुम्बा, बुढानीलकण्ठ एकैदिनमा घुमेर फर्किन सक्नेछन् ।
सुन्दरीजललाई शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्धारको रुप्मा पनि मानिन्छ । पिकनिक र घुम्नका लागि चर्चित ठाउँ पनि हो सुन्दरीजल । सुुमुन्द्री सतहबाट १ हजार २ सय ८० मिटरको उचाइमा रहेको छ सुन्दरीजल ।
वनले भरिभराउ यो क्षेत्रमा झरना हेर्न र पानीमा खेल्न पाइन्छ । सुन्दरीजलबाट मुलखर्क हुँदै ओखेनी जाने चाँगुनारायणबाट सुन्दरीजल आउने चल्तीको हाइकिङ रुट पनि रहेको छ ।
ललितपुर जिल्लामा रहेको लाकुरीभञ्जाङबाट उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका मनोमहक दृश्यहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । सुमन्द्री सतहबाट १ हजार ९ सय ७७ उचाइमा रहेको लाकुरीभञ्जाङ चारैतिर वनले घेरिएको छ ।
लाकुरीभञ्जाङ जानका लागि सडकको अवस्था नाजुक भएपनि हाइकिङ जानजेहरुले भने रमाइलो गर्न सक्नेछन् । यो क्षेत्र पिकनिकका लागि पनि चर्चित क्षेत्र हो ।
Last Updated on: January 17th, 2021 at 6:11 am